ကွန်​ပျူ​တာ​တစ်​လုံး ​လုပ်​ဆောင်​မှု ​မြန်​ဆန်​အောင် ​ဘာ​တွေ ​လုပ်​သင့်​သ​လဲ . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကွန်​ပျူ​တာ​တစ်​လုံး ​လုပ်​ဆောင်​မှု ​မြန်​ဆန်​အောင် ​ဘာ​တွေ ​လုပ်​သင့်​သ​လဲ .
​ဒါ​က​တော့ ​ကွန်​ပျူ​တာ ​သုံး​တဲ့​လူ​များ​အား​လုံး ​သိ​စေ​ချင်​လို့ ​ကျွန်​တော် ​ရေး​လိုက်​တာ​ပါ . ​မေး​ထား​တာ​လဲ ​ညီ​အစ်​ကို ​တော်​တော်​များ​နေ​လို့​ပါ . ​ဒီ​နေ့​တော့ ​ထူး​ထူး​ခြား​ခြား ​ညီ​လေး​တစ်​ယောက် ​ကျွန်​တော့်​ကို ​လာ​ပြီး​တောင်း​ပန်​လာ​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော် ​ဘယ်​သူ့​ကို​မှ ​တိုက်​ခိုက်​တာ ​စော်​ကား​ခဲ့​တာ ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး . ​ကိုယ့်​လမ်း​ကို ​လျှောက်​နေ​တာ​ပါ . ​ဒီ့​အ​တွက် ​ကိုယ့်​လိပ်​ပြာ​ကို ​သန့်​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​ကို ​လာ​လာ​ပြီး​အော်​ပြီး ​အ​မြင်​မ​တော်​တဲ့ ​စ​ကား​လုံး​များ​နှင့် ​လာ​လာ​ရေး​နေ​တာ​ပါ​တဲ့ . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက် ​ကျွန်​တော့်​ကို ​ကျွန်​တော်​ရှက်​ပြီး ​လိပ်​ပြာ​မ​လုံ​တော့​လို့ ​ပါ​တဲ့ . ​ကျွန်​တော်​စိတ်​ထဲ​မှာ ​ဘာ​မှ​ကို ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး . ​လာ​ဆဲ​တဲ့ ​သူ​တွေ​အ​ပေါ်​မှာ​လဲ ​ဘယ်​လို​မှ ​ခံ​စား​ချက်​ကို ​မ​ထား​တော့​တာ​ပါ . ​သူ​လဲ ​သူ​ဝါ​သ​နာ​ပါ​လို့ ​လာ​ဆဲ​တာ . ​ကို​လဲ ​ဝါ​သ​နာ​ပါ​လို့ ​ရေး​နေ​တာ​ပါ . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက်​တော့ ​နောင်​တ​မ​ရ​ပါ​ဘူး . ​အ​ခု​လို ​လာ​ပြီး ​တောင်း​ပန်​တဲ့​ညီ​လေး​ကို​လဲ ​အစ်​ကို ​ဘယ်​လို​မှ ​သ​ဘော​မ​ထား​ပါ​ဘူး . ​ဒီ​ပို့စ်​ထဲ​မှာ ​ထည့်​ရေး​လိုက်​တဲ့ ​အ​တွက်​တော့ ​အစ်​ကို့​အ​ပေါ်​မှာ ​တစ်​မျိုး​မ​ထင်​စေ​ချင်​ပါ​ဘူး . ​ကဲ ​ကွန်​ပျူ​တာ​တစ်​လုံး ​မြန်​ဆန်​အောင် ​ဘာ​လုပ်​သင့်​သ​လဲ (၁) ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ virus ​စစ်​တဲ့​အ​ချိန်​နဲ့ ​တစ်​ခြား​အ​ချိန်​တွေ​မှာ antivirus ​ကြောင့် ​စက်​လေး​နေ​တတ်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက် ​ပေါ့​ပါး​ပြီး ​ကောင်း​မွန်​တဲ့ kaspersky ​လို antivirus program ​ကို ​သုံး​သင့်​ပါ​တယ် . (၂) ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ​ဟာ program ​တွေ​ကို ​ဖြုတ်​လိုက် ​ပြန်​တင်​လိုက် ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဖျက်​လိုက် ​ပြန်​ထည့်​လိုက် ​လုပ်​နေ​တာ ​ဆို​ရင် ​အဲ့​ဒီ့​စက်​ဟာ ​ကြာ​လာ​တာ​နဲ့​အ​မျှ ​စက်​ဟာ​လေး​လာ​မှာ​ပါ . ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် ​အ​ဆို​ပါ program ​တွေ​ကို ​ဖြုတ်​လိုက်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ program uninstall ​လုပ်​တုန်း​က program ​တော်​တော်​များ​များ​ဟာ ​အ​ကုန်​လုံး​ကို ​မ​ဖျက်​သွား​ပါ​ဘူး . ​တစ်​ချို့ temporary files ​တွေ ​ကျန်​နေ​ခဲ့​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​ဖိုင်​တွေ​ဟာ ​ကွန်​ပျူ​တာ​တစ်​လုံး​အ​တွက် ​မ​လို​အပ်​ပါ​ဘူး . ​အဲ့​လို​ဖိုင်​တွေ ​များ​လာ​တာ​ဟာ HDD ​အ​တွက် ​မ​ကောင်း​တဲ့​အ​လား​အ​လာ​ပါ . ​အဲ့​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဖျက်​ပစ်​ရ​ပါ​မယ် . (၃) ​မိ​မိ HDD ​မှာ system error ​ကြောင့်​ဖြစ်​လာ​တဲ့ bad sector ​တွေ​ကို ​မ​ကြာ​ခ​ဏ​ဆို​သ​လို fix ​လုပ်​ပေး​ရ​ပါ​မယ် . ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ bad sector ​တွေ​များ​လာ​တဲ့​အ​တွက် partition ​တောင် ​ပိုင်း​မ​ရ​တဲ့​အ​ခါ​မျိုး​တွေ ​ရှိ​တတ်​ပါ​တယ် . ​တစ်​လ​ကို​တစ်​ကြိမ်​လောက်​တော့ bad sector ​ကို fix ​လုပ်​ပေး​ပါ . (၄) ​နောက်​တစ်​ချက်​က File ​တွေ​ကို ​ပြန်​ပြီး ​စီ​ပေး​ပါ . ​ဘာ့​ကြောင့် ​ဖိုင်​တွေ​ပြန်​စီ​ရ​တာ​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော်​ဥ​ပ​မာ ​တစ်​ခု​ပေး​ပါ့​မယ် . ​အ​တွဲ (၁၀)​တွဲ​ရှိ​တဲ့ ​မီး​ရ​ထား​တွဲ​တစ်​တွဲ​မှာ ​ဆို​ပါ​စို့​ဗျာ . ​အဲ့​ဒီ့​အ​ခန်း​တွေ​ကို ​ဖိုင်​တွေ​လို့ ​သ​ဘော​ထား​လိုက် . ​မိ​မိ​က ​အ​တွဲ(၁) ​နဲ့ (၂) ​မှာ ​ရှိ​တဲ့ ​ပ​စ္စည်း​တွေ​ကို ​ယူ​သုံး​လိုက်​မယ် (​ဖိုင်​ဖျက်​လိုက်​တယ်). ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွဲ(၁) (၂) ​ထဲ​မှာ ​ဘာ​မ​ရှိ​တော့​ဘူး . ​ဗ​လာ​ကြီး​ပဲ​ကျန်​သေး​တယ် . ​နောက်​ထပ် ​အ​သစ်​လာ​တဲ့​ကုန်​ပ​စ္စည်း​တွေ​ကို ​အ​တွဲ(၁)​နဲ့ (၂) ​မှာ ​မ​ထား​ဘဲ​နဲ့ ​ဟိုး​နောက်​တွဲ​မှာ ​သွား​ထား​မယ်​ဆို​ရင်(​ဖိုင်​အ​သစ်​တွေ​ထည့်​မယ်) ​မိ​မိ​က​လို​အပ်​လို့ ​ကုန်​ပ​စ္စည်း​တွေ​ကို ​ထုတ်​ယူ​မယ်​ဆို​ရင်(​ဖိုင်​ကို​ခေါ်​သုံး​မယ်၊ ​ဖွင့်​မယ်) ​ဟိုး​နောက်​တွဲ​က​နေ ​သွား​သွား​ပြီး​ယူ​နေ​ရ​တာ​ဆို​တော့ ​အ​ချိန်​ကြာ​တာ​ပေါ့ . ​မ​ဟုတ်​ဘူး​လား . ​အဲ့​ဒီ့​တော့ ​အဲ့​ဒီ့​ရ​ထား​တွဲ ​မြန်​လာ​အောင် ​ဘာ​လုပ်​ရ​မ​လဲ၊ ​ကုန်​ပ​စ္စည်း​တွေ​ကို ​ထုတ်​ပစ်​မယ်၊ ​ရောင်း​ပစ်​မယ်(​ဖျက်​ပစ်​သည်) ​ပြီး​ရင် ​အဲ့​ဒီ့​လွတ်​နေ​တဲ့ ​အ​ခန်း​တွေ​ထဲ​ကို ​နောက်​တွဲ​တွေ​ထဲ​က ​ကုန်​တွေ​ကို ​ပြောင်း​ထည့်​မယ် (​ဖိုင်​ပြန်​စီ​လိုက်​သည်) ​ဆို​ရင် ​ကို​တစ်​ချိန်​လို​အပ်​လို့ ​ကုန်​တွေ​ထုတ်​မယ် (​ဖိုင်​တွေ​ဖွင့်​မယ်) ​ဆို​ရင် ​နောက်​အ​ထိ​သွား​စ​ရာ​မ​လို​တော့​ဘူး . ​ရှေ့​ခန်း​က​နေ ​ယူ​လို့​ရ​တယ်​လေ . ​အ​ခု​လဲ ​ဒီ​သ​ဘော​ပါ​ပဲ . ​အဲ့​တော့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​လေး​တာ ​ကြာ​တာ၊ ​ဖိုင်​တွေ ​ဟို​တစ်​ဖိုင် ​ဒီ​တစ်​ဖိုင်​ရောက်​နေ​လို့​ပါ ​ဆို​တဲ့​အ​ချက်​တစ်​ချက်​လဲ ​ပါ​ပါ​တယ် .
​တစ်​ခြား​အ​ချက်​တွေ​ကျန်​ပါ​သေး​တယ် . ​ဒါ​က​တော့ ​လတ်​တ​လော ​ပြော​ပြ​တဲ့​အ​ချက်​လေး​တွေ​ပါ . ​ထပ်​ရေး​ပါ​ဦး​မယ် . ​ဒီ​အ​ဆင့် ၄ ​ဆင့်​လောက်​ကို​ပဲ ​အ​ခု​လုပ်​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​ကွန်​ပျူ​တာ ​ယ​ခင်​က​ထက် ​ပို​မို​မြန်​ဆန်​လာ​တာ​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
​နံ​ပါတ်(၁) ​အ​တွက်​က​တော့ ​စိတ်​မ​ပူ​ပါ​နဲ့ ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​မှာ antivirus program ​ကောင်း​ကောင်း​တွေ ​တင်​ထား​ပေး​ပြီး​သား​ပါ . ​ဒီ​မှာ ​သွား​ယူ​လိုက်​ပါ .
​နံ​ပါတ်(၂) ​အ​တွက်​က​တော့ ​ကျွန်​တော်​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ ccleaner ​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ပြီး​တော့ ​မ​လို​အပ်​တဲ့ tempory file ​များ​ကို ​ဖျက်​ပစ်​လို့​ရ​ပါ​တယ် . Ccleaner ​ကို ​ဒီ​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် .
​နံ​ပါတ်(၃) ​အ​တွက်​က​တော့ Bad sector ​ကို ​ဘယ်​လို Fix ​လုပ်​မ​လဲ​ဆို​တဲ့ ​ပို့စ်​ကို ​ဒီ​မှာ ​ရေး​ထား​ပြီး​သား​ပါ .
​နံ​ပါတ်(၄) ​ဖိုင်​တွေ ​ပြန်​စီ​ဖို့​အ​တွက်​က​တော့ ​ဒီ​မှာ ​နှင့် ​ဒီ​မှာ ​မှာ ​တင်​ထား​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​တဲ့ program ​နဲ့​သာ ​ဖိုင်​ပြန်​စီ​လိုက်​ပါ . window ​မှာ​လဲ​ပါ​ပြီး​သား​ပါ . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​သူ​က ​အ​ခု​တင်​ပေး​တဲ့ Defragment ​လောက်​တော့ ​မ​ကောင်း​ပါ​ဘူး . ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် ​အ​ခု​တင်​ပေး​တဲ့ Defragment program ​ဟာ ​ဖိုင်​စီ​ဖို့​အ​တွက် ​သီး​သန့် program ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် window ​မှာ​ပါ​တဲ့ program ​ထက်​ကောင်း​တယ်​ဆို ​တာ​တော့ ​ငြင်း​လို့​မ​ရ​ပါ​ဘူး . .
​နံ​ပါတ်(၅) error ​များ​ကို ​ပြင်​ဆင်​ဖို့​အ​တွက် Advanced SystemCare ​လို​မျိုး program ​ကို​လဲ ​စက်​ထဲ​မှာ install ​လုပ်​ထား​ဖို့​လို​ပါ​တယ် . ​ဒါ​မှ ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ ​ဖြစ်​နေ​တဲ့ error ​တွေ​ကို ​ပြင်​ဆင်​နိုင်​ပြီး ​ကွန်​ပျူ​တာ​အ​သုံး​ပြု​မှု ​မြန်​ဆန်​လာ​မှာ​ပါ . Advanced SystemCare ​ကို ​ဒီ​မှာ ​တင်​ထား​ပေး​ပြီး​သား​ပါ .
​မောင်​ဘ​ကြိုင် December 9, 2009 at 8:09 AM
wonna January 5, 2010 at 6:39 AM
Wai February 12, 2010 at 5:55 PM
​ဂိမ်း​ဘ​လော့​ဂါ July 23, 2010 at 3:54 PM
​သား​သား ... ​မိုက်​တယ်​ဗျ ​သား​က​တော့​အ​ရမ်း​ကြိုက်​တယ်
​ဒီ​မွန်း October 17, 2011 at 3:56 PM
​အ​ကို​ပြော​တဲ ​ဒီ​မှာ ​ဆို​တာ​တွေ​က​ဘာ​မှ​လဲ​မ​တွေ့​ဘူး​ဗျာ။​လုပ်​ပေး​ပါ​အုံး
yinNyein ko kyaw yinnyein Kokyaw December 27, 2012 at 9:22 PM
yinNyein ko kyaw yinnyein Kokyaw December 27, 2012 at 9:24 PM
ko phyo January 14, 2013 at 4:56 PM
​အ​ကို Software ​တွေ​က ​ဝင်​လို့​မ​ရ​ဝူး...​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လည်း...